Exercises uye Kudzidziswa - Vondt.net
Archive eChikamu: Maekisesaizi uye Kudzidziswa
6 Maekisesaizi Kune Vaya vane Fibromyalgia
12 / 09 / 2017 /0 Comments/i fibromyalgia, Kurwadziwa kusingaperi, Kurovedza muviri uye kurovedza muviri/av kundikuvadza
Fibromyalgia chirwere chisingaperi chinoita kuti kurwadziwa kwakawanda uye kuwedzera kwekunzwa mukati memitsipa uye mhasuru.
Mamiriro acho anogona kuita kuti kudzidzira nguva dzose kuve kwakaoma uye kunenge kusingaite dzimwe nguva - saka takaisa pamwechete chirongwa chekudzidzisa chinosanganisira 6 maekisesaizi akapfava akagadzirirwa avo vane fibromyalgia. Ndinovimba izvi zvinogona kupa zororo uye kubatsira kukupa hupenyu huri nani hwezuva nezuva. Isu tinokurudzirawo kudzidziswa mudziva remvura inopisa kana uine mukana wokudaro.
-Kumadhipatimendi edu akasiyana-siyana kuVondtklinikkene muOslo (Lambertseter) uye Viken (Eidsvoll Inzwi og Råholt) varapi vedu vane hunyanzvi hwakasiyana hwepamusoro mukuongorora, kurapwa uye kudzidziswa kwekuvandudza kurwadziwa kusingaperi. Dzvanya pane zvinongedzo kana pano kuti uverenge zvakawanda nezvemadhipatimendi edu.
bhonasi: Skroka pasi kuti uone vhidhiyo yekurovedza muviri ine maekisesaizi akagadzirirwa avo vane fibromyalgia, uye kuverenga zvakawanda nezve nzira dzekuzorora.
Verenga zvakare: Mazano 7 Ekutsungirira neFibromyalgia
VIDEO: 6 Tsika Simba Simba Exercises kwatiri neFibromyalgia
Pano iwe unoona yakagadziriswa chirongwa chekurapa kune avo vane fibromyalgia yakagadziriswa na chiropractor Alexander Andorff - mukubatana neye physiotherapist uye yake yemunharaunda rheumatism timu. Dzvanya pane vhidhiyo pazasi kuti uone maekisesaizi.
Joinha mhuri yedu uye unyorere kune yedu YouTube chiteshi yemahara ekurovedza muviri, zvirongwa zvekurovedza muviri uye ruzivo nezvehutano. Welcome!
VIDEO: Maekisesaizi mashanu anopesana neTight Back Misums
Fibromyalgia inosanganisira chiitiko chakawedzera chekurwadziwa kwemhasuru uye kushushikana kwemhasuru. Pazasi pari maekisesaizi mashanu anogona kukubatsira kusunungura mhasuru dzakasimba uye dzakagadzikana.
Wafarira mavhidhiyo here? Kana wainakidzwa nazvo, tinokutendai chaizvo kunyorera kuYouTube chiteshi uye kutipa zvigunwe pasocial media. Zvinoreva zvakawanda kwatiri. Kubonga kukuru!
Pamwe chete muhondo Yekurwisa Kurwadziwa Kusingaperi
Isu tinotsigira munhu wese ane kurwadziwa kusingaperi mukurwira kwavo uye tinovimba muchatsigira basa redu nekuda saiti yedu kuburikidza Facebook uye unyore kune yedu vhidhiyo chiteshi pa YouTube. Isu tinoda zvakare kunongedza nezveboka rekutsigira Rheumatism uye Chirwere Chisingaperi - Norway: Kutsvaga uye nhau - inova yemahara Facebook boka kune avo vane kurwadziwa kusingaperi kwaunoziva ruzivo nemhinduro.
Kunyanya kutarisisa kunofanirwa kuiswa pakutsvagisa kwakanangana nemamiriro anobata vazhinji - ndosaka tichikukumbira nemutsa kuti ugovane chinyorwa ichi pasocial media, zvirinani kuburikidza yedu Facebook peji uye uti, "Hongu kune kutsvakisisa kutsanangura nezve fibromyalgia". Nenzira iyi munhu anogona kuita kuti 'chirwere chisingaonekwe' chiwedzere kuoneka.
Yakagadziriswa uye Yakanyorovedza Exercise
Izvo zvakakosha kuti uzive kukwana kwayo kudzivirira "flare-ups" uye kudzikira. Naizvozvo, zvirinani kuyedza kudzidziswa kwakadzikira kwakawanda pane kutora "kubata kwechikwata", sekupedzisira, kana kukaitwa zvisizvo, kuisa muviri mukusaenzana uye kukonzeresa kurwadziwa.
Verenga zvakare: 7 Anozivikanwa Matangi Angave Aggravate Fibromyalgia
Dzvanya pamufananidzo uri pamusoro kuti uverenge chinyorwa.
1. Kuzorora: Kufema Techniques & Acupressure
Kufema chinhu chakakosha pakurwisa kusagadzikana kwemhasuru pamwe nemarwadzo akabatana. Nekufema kwakakodzera, izvi zvinogona kukonzera kushanduka kwakawanda mukara wembambo uye zvinosanganiswa nemhasuru zvinosanganiswa nazvo zvinozotungamira mukudzikidzika kwekunetseka kwemhasuru.
Nheyo huru yeinoonekwa seyekutanga nzira yekufema yakadzika ndeyekufema mukati nekubuda kashanu muminiti imwe.. Nzira yekukwanisa kuita izvi kufema zvakadzika uye kuverenga kusvika ku5, usati wabuda zvakanyanya uye zvakare kuverenga kusvika ku5.
Mushandi wepamberi peiyi michina akawana kuti izvi zvine mhedzisiro pamusiyano wekushomeka kwemoyo zvine hukama nekuti iyo yakaiswa kune yakakwira frequency uye nekudaro yakagadzirira kurwisa kusagadzikana kushushikana.
Imwe nzira yekufema inozivikanwa ndeyekufema uchipikisa. Izvi zvinofanira kuita kuti muviri usununguke uye upinde mune imwe nzvimbo yakasununguka. Maitiro ekufema anoitwa nekufema zvakadzama obva abuda nemumuromo zvanga zvakavharika - kuti miromo haina daro rakakura uye kuti unofanirwa 'kusundira' mhepo kuti isapikisane.
Nzira iri nyore yekuita 'kupokana nekufema' kufema kuburikidza nemuromo uye nekubuda nemumhino.
Kuzorora neAcupressure Mat
Iyo yakanaka yekuzviyero yekudzikamisa kusawirirana kwemhasuru mumuviri inogona kushandiswa zuva nezuva acupressure bonde (ona muenzaniso apa - chinongedzo chinovhura muhwindo idzva). Isu tinokukurudzira kuti utange nezvikamu zveanosvika maminetsi gumi nemashanu wobva washanda nzira yako kusvika kumasesheni akareba sezvo muviri unowedzera kushivirira mapoinzi emasaji. Dzvanya pano kuti uverenge zvakawanda nezve mat yekuzorodza. Chii chakawedzera kunaka pamusoro peichi musiyano watinobatanidza nacho ndechekuti inouya nechikamu chemutsipa chinoita kuti zvive nyore kushandira kune yakasimba mhasuru mumutsipa.
2. Kupisa uye Kutambanudza
Kuoma kwakabatana uye kurwadziwa kwemhasuru kazhinji chikamu chinofinha chehupenyu hwezuva nezuva kune avo vanobatwa ne fibromyalgia. Naizvozvo, zvakanyanya kukosha kuti muviri uenderere mberi nekugara uchitambanudza uye kufamba kwakajeka zuva rese - kugara uchitambanudza kunogona kukonzera kuti majoini afambe zviri nyore uye neropa kuyerera kune mhasuru dzakasimba
Izvi zvinonyanya kuitika kune makuru masumbu emapoka senge hamstrings, gumbo tsandanyama, zvigaro mhasuru, kumashure, mutsipa nemapfudzi. Wadii kuedza kutanga zuva nerakareba rinotambanudza chikamu chakanangana nemapoka akakura emuswe?
3. Yakakwana Yekupfeka Kurovedza yeiyo Yese Kudzoka Nemutsipa
Ichi chiitiko chinotambanudza nekusimudzira musana nenzira nyoro.
Kutanga Position: Mira pane ese mana pane yekudzidzira mat. Edza kuchengetedza mutsipa wako uye musana musingarerekeri, yakati kurei nzvimbo.
Kutambanudza: Wodzikisa matako ako pazvitsitsinho zvako -kufamba kwakadzikama. Rangarira kuchengetedza kusarerekera kwazvakarereka mumuzongoza. Bata kutambanudza kwemasekonzi makumi matatu. Izvo zvipfeko chete sekudzokera shure sezvaunogarika nazvo.
Kangani?Dzokorora chiitwa ka4-5. Kudzidzira kunogona kuitwa 3-4 nguva pazuva kana zvichidiwa.
4. Yekupisa mvura pombi kudzidziswa
Vanhu vazhinji vane fibromyalgia uye rheumatic kusagadzikana vanobatsirwa nekudzidziswa mudziva remvura inopisa.
Vanhu vazhinji vane fibromyalgia, rheumatism uye kurwadziwa kusingaperi vakaziva kuti kurovedza muviri mumvura inopisa kunogona kuve kwakapfava - uye kuti inobhadhara zvakanyanya majoini akaomarara uye mhasuru dzinorwadza.
Isu tine maonero ekuti mvura inopisa pombi yekudzidziswa inofanira kuve nzvimbo yakatarisana yekudzivirira uye kurapa kwehurefu hwehusuru uye marwere akabatanidzwa. Nehurombo, chokwadi ndechekuti kupa kwakadaro kunogara kuvharika nekuda kwekushomeka kwemasports. Tinovimba kuti maitiro aya anodzoserwa kumashure uye kuti akatariswa zvakanyanya pane iyi nzira yekudzidziswa.
5. Zvinyoro zvipfeko Zvekudzidzira uye Kufambisa Kudzidziswa (neVIDHIYO)
Heino kusarudzwa kweakajairwa maekisesaizi kune avo vane fibromyalgia, mamwe asingaperi kurwadziwa kwekuongororwa uye rheumatic kusagadzikana. Tinovimba unozviwana zvichibatsira - uye kuti iwe sarudzawo kugovana navo (kana chinyorwa) nevanozivana navo neshamwari vane zvakare kuongororwa kwakafanana newe.
VIDEO - 7 Exercises yeRheumatists
Iyi vhidhiyo haina kutanga kana iwe ukaipidigura? Edza kumutsidzira browser rako kana uzvitarise zvakananga paYouTube chiteshi. Rangarirawo kunyorera kuchiteshi kana uchida zvimwe zvirongwa zvakanaka zvekudzidzira uye kurovedza muviri.
Vazhinji vane fibromyalgia vanokanganisika apo neapo Sciatica marwadzo neredhiyo kumakumbo. Kuita marefu ekurovedza muviri uye kurovedza muviri kudzidziswa sezvakaratidzwa pasi apa zviri nyore kutamisa zvinogona kutungamira mukufambisa kwakawanda mhasuru mafuru uye kushoma kwemhasuru kushushikana - izvo zvinogona kukonzera sciatica shoma. Zvinokurudzirwa kuti utambanudze masekondi 30-60 pamusoro pemaseti matatu.
VIDEO: Mhando dze 4 dzeKupfeka dzePiriformis Syndrome
6. Yoga uye Kufunga
Yoga inogona kutinyaradza kwatiri ne fibromyalgia.
Dzimwe nguva marwadzo anogona kukurira uye zvino zvinogona kubatsira kushandisa zvinyoro-nyoro yoga maekisesaizi, maitiro ekufema uye kufungisisa kuti udzore kudzora. Vazhinji vanosanganisa yoga ne acupressure bonde.
Nekudzidzira iyo yoga musanganiswa nekufungisisa, iwe unogona zvishoma nezvishoma kuwana zviri nani kuzvidzora uye kuzvimisa kure kubva pakurwadziwa pavanenge vari kwavo zvakanyanya. Boka re yoga rinogona zvakare kuva rakanaka maererano nehukama, uyezve kuti inogona kunge iri nhandare yekuchinjana mazano uye zviitiko zvine marapirwo akasiyana uye maekisesaizi.
Heano mamwe akasiyana eiyoyo yoga maseti anogona kuyedzwa kunze (izvo zvinongedzo zvakavhurwa mune newindo):
- 5 Yoga Exercises yeHipp Pain
- 5 Yoga Exercises yeMusana Kurwadziwa
- 5 Yoga Exercise Inopesana Nekutsiga Mutsipa
Yakakurudzira Yega-Kubatsira kweRheumatism uye Kusingaperi kurwadziwa
Compression fuertes (senge kumanikidza masokisi anobatsira mukuwedzera kweropa kutenderera kusvika pakurwadzisa nyama kana yakanyatsogadziriswa compression magurovhosi zvinopesana nerheumatic zviratidzo mumaoko)
Dzvanya pamufananidzo kuti uverenge zvakawanda nezve compression magiravhusi.
Mini matepi (vazhinji vane rheumatic uye kurwadziwa kusingaperi vanonzwa kuti zviri nyore kudzidzisa netsika elastics)
Rukungiso pfungwa Balls (kuzvibatsira kubatsira kushandira tsandanyama zuva nezuva)
Arnica kirimu kana kupisa conditioner (mishumo yakawanda yekuvandudzwa mukushandiswa)
Pfupiso: Maekisesaizi uye Relaxation Techniques kune Avo vane Fibromyalgia
Fibromyalgia inogona kuve inoshungurudza uye inotambudza muhupenyu hwezuva nezuva.
Naizvozvo, zvakakosha kuziva zvinyoro-nyoro izvo zvakakodzerawo kune avo vane kurwadziwa kwakanyanya mumhasuru uye majoini. Wese munhu anorayirwa kuti ajoina iro Facebook boka rekutsigira mahara Rheumatism uye Chirwere Chisingaperi - Norway: Kutsvaga uye nhau kwaunogona kutaura nevanhu vane pfungwa dzakafanana, gara kusvika parizvino pane nhau nezvenyaya iyi uye nekuchinjana zviitiko.
Inzwa wakasununguka kugoverana munhau yemagariro
Zvekare, tinoda kukukumbira kuti ugovane chinyorwa ichi pasocial media kana kuburikidza neblog rako (inzwa wakasununguka kubatanidza zvakananga kuchinyorwa). Kunzwisisa uye kuwedzera kutarisa ndiyo nhanho yekutanga kune hupenyu huri nani hwezuva nezuva kune avo vane fibromyalgia.
Sarudzo A: Goverana zvakananga paFB - Kopa iyo webhusaiti kero uye unamate pane yako facebook peji kana mune inoenderana facebook boka iwe uri nhengo. Kana tinya iro "SHARE" bhatani pazasi kuti ugovane posvo kumberi pane yako facebook.
(Tinya apa kuti ugovane)
Kutenda kukuru kune wese munhu anobatsira kusimudzira kunzwisisika kwe fibromyalgia uye chirwere chisingaperi chekurwadziwa.
Sarudzo B: Batanidza zvakananga kuchinyorwa pane yako blog.
Sarudzo C: Tevedza uye wakaenzana Yedu Facebook peji (tinya apa kana uchida)
Mibvunzo? Kana kuti unoda kubhuka nguva yekusangana kune imwe yemakiriniki edu akabatana?
Isu tinopa kuongororwa kwemazuva ano, kurapwa nekugadzirisa marwadzo asingagumi.
Inzwa wakasununguka kutibata nesu kuburikidza neimwe ye makiriniki edu ehunyanzvi (muonero wekiriniki unovhura pahwindo idzva) kana kuenderera yedu Facebook peji (Vondtklinikkene - Hutano uye Kurovedza muviri) kana uine chero mibvunzo. Zvekugadzwa, tine XNUMX-awa yekubhuka pamhepo kumakiriniki akasiyana-siyana kuitira kuti uwane nguva yekubvunza inonyatsokunakira iwe. Munokwanisawo kutifonera mukati memaawa ekuvhurwa kwekiriniki. Tine madhipatimendi akasiyana-siyana muOslo (inosanganisirwa Lambertseter) uye Viken (Råholt og Eidsvoll) Varapi vedu vane hunyanzvi vanotarisira kunzwa kubva kwamuri.
NEXT PAGE: - Kutsvagisa: Iyi ndiyo Yakanyanya Fibromyalgia Kudya
Dzvanya pamufananidzo uri pamusoro kufambisa kuenda kune inotevera peji.
- Inzwa wakasununguka kutevera Vondt.net pa YOUTUBE
- Inzwa wakasununguka kutevera Vondt.net pa Facebook
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/6-øvelser-mot-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 kundikuvadza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 kundikuvadza2017-09-12 15:45:552022-03-22 15:39:076 Maekisesaizi Kune Vaya vane Fibromyalgia
6 yoga maitikiro eStress
16 / 08 / 2016 /0 Comments/i unhu Articles, Kurovedza muviri uye kurovedza muviri/av kundikuvadza
Kunetseka? Heano ma6 Yoga Exercises ayo anogona kukubatsira kuzorora uye kuderedza tsandanyama kushushikana. Inzwa wakasununguka kugovana nemunhu ane kushushikana.
Yoga uye yoga zviitwa zvinogona kubatsira kana zvasvika pakuzorora uye kutandara muhupenyu hwezuva nezuva hwehupenyu. Kugara uchitambanudza uye kufamba kunogona kuve chiyero chakanaka chekumisikidza mhasuru dzakakombama uye majoini akaomarara. Edza kuseta maminetsi makumi maviri nemakumi mana zuva rega rega nekuda kweizvi, ipapo uchazokwanisa kuona kufambira mberi kukuru.
1. Sukhusana (Kufungisisa Position)
Ino yoga inosimudzira inoburitsa diaphragm uye inokutendera kuti ufeme pamwe nedumbu rako. Simbisa kuzorora uye kufema zvakanyanya nedumbu rako. Tora mweya wakadzika kuburikidza nemhino dzako uye wobva wafema kunze zvishoma nezvishoma kuburikidza nemuromo wako. Dzokorora zvinopfuura makumi matatu kusvika makumi mana mweya.
Nzvimbo yekuzorora yoga iyo inowedzera kufamba muchiuno uye chigaro. Inotambanudza uye inopa kumwe kuchinjika kune kunyanya yepazasi kumashure. Tsvaga chinzvimbo icho chinotambanudza zvirinyore uye ubate kwemasekondi makumi matatu usati wadzokorora pamusoro pe 30-3 maseti.
Iyo yoga chinzvimbo uko iwe kwaunogona kunyatso kusunungura kusagadzikana uye kusagadzikana. Izvi zvinotambanudza musana wese kubva kuchikamu chezasi nzira yese kusvika kuchinjika kumutsipa - mhasuru dzatinoziva tese dzinogona kunetsa kutambanudza nenzira yakanaka. Inotambanudza uye inopa kumwe kuchinjika kune ese ezasi uye epamusoro kumashure. Mira pamabvi ako uye rega muviri wako udonhe kumberi nemaoko akatambanudzwa sezvakaratidzwa mumufananidzo - ita shuwa kuti unoita izvi mukutenderera, kudzikama kufamba. Tsvaga chinzvimbo icho chinotambanudza zvirinyore uye ubate kwemasekondi makumi matatu usati wadzokorora pamusoro pe 30-3 maseti.
4. «5 -chnology» (Kudzika kufema maitiro)
Musimboti wekutanga wekutanga wekufema wekudhizaina kufema mukati nekubuda ka5 mumineti imwe. Nzira yekuzadzisa izvi kutora mweya wekufema uye kuverenga kusvika ku5, usati waburitsa mweya wakawanda uye zvakare kuverenga kusvika ku5.Vavambi vehunyanzvi vanonyora kuti izvi zvine mhedzisiro pane kusiyanisa kwemhindo yemoyo maringe neichi kuiswa kune yakakwira frequency uye nekudaro kuve wakagadzirira kurwisa kusagadzikana kusagadzikana. Iyi nzira yekufema inogona kusanganiswa neiyo yoga chinzvimbo Sukhusana.
Viparita Karani inzvimbo ye yoga inopa muviri zororo-rakakodzera nguva apo uchibvisa kumanikidzwa kubva pamutsipa uye kumashure. Paunenge uchiita ichi chiitiko, shandisa iyo yoga mat uye tauro yekuwedzera yakasimba m'chiuno. Iwe unozvionera wega kuti yakakura sei yako yakakodzera iwe - kuyera kure nehuremu kumadziro uye kona yemakumbo. Edza kuchengeta makumbo ako akatwasuka apo uchirega mapendekete nemitsipa zvichinyura kudzika pasi. Nyorodza mutsipa wako kumashure uye rega maoko ako awire pasi nemaoko ako kumusoro. Bata chinzvimbo ichi kwemaminitsi mashanu kusvika mashanu uku uchifema zvakadzikama uye uchidzora.
Basa rinobudirira rinoburitsa kusagadzikana mumutsipa nemapfudzi. Mira pamakumbo mana uye wosimudza chigaro zvishoma nezvishoma kusvika padenga - kusvika iwe wasvika pane inoenzanisirwa nzvimbo. Bata chinzvimbo kwemasekondi angangoita 30-60 (kana serefu sezvaunogona) uye zvishoma nezvishoma udzikise pasi zvakare. Chiitwa chinogonesa chakakodzera zvimiro uye mhasuru dzakakomberedza mapfudzi nenzira yakanaka. Dzokorora pamusoro pe 4-5 seti.
Aya maitiro akanaka eyoga anofanirwa kuve anofanirwa kuitwa zuva nezuva kuti zviite zvakanyanya - asi isu tinoziva kuti mazuva epakati pevhiki haabvumire izvi nguva dzose, saka tinofunga kuti wakanaka kunyange kana uchikwanisa kuzviita zuva rega rega.
Ndinofanira kuita kakawanda sei kurovedza muviri?
Izvo zvese zvinoenderana newe. Tsvaga zvinokubatsira pakutanga uye uvake zvishoma nezvishoma asi zvirokwazvo uchienda kumberi. Iyi inogona kuve nguva inopedza asi inogutsa zvikuru. Kana iwe uine chirwere, tinokukumbira kuti ubvunze chiremba wako kana izvi zviitwa zvingakubatsira iwe - pamwe zviedze pachako nokungwarira. Isu tinokukurudzira kuti uve uri kufamba uye kuenda kunokwira munzvimbo dzakaomarara kana zvichibvira.
Inzwa wakasununguka kugovera zviitwa izvi pamwe nevamwe, shamwari uye vaunozivana. Kana iwe uchizoda kurovedzwa kunotumirwa segwaro rine kudzokorora uye nezvimwe, tinokukumbira se uye sangana kuburikidza kuwana Facebook peji pano. Kana iwe uine chero mibvunzo, ingoipa kuti uende taura nesu kana taura zvakananga mune imwe yezvinyorwa zvedu zvakakodzera nyaya yako.
NEXT PAGE: - Kurwadziwa mumutsipa? Iwe unofanirwa kuziva izvi!
DZIMWE ZANO: - 5 Maekisesaizi Akanaka Kurwisa Mapfudzi Akaipa
Chii chandingaite kunyangwe kune mhasuru pamwe nekurwadziwa kwemajoini?
1. Kurovedza muviri kwakawanda, kurovedza muviri chaiko, kutambanudza uye chiitiko zvinokurudzirwa, asi ramba uri mukati mekurwadziwa. Kufamba kaviri pazuva kwemaminitsi makumi maviri kusvika makumi mana kunogadzirisa muviri wese uye maronda emurume.
2. Trigger point / massage mabhora isu tinokurudzira kwazvo - vanouya mumasayizi akasiyana kuitira kuti iwe ugone kurova zvakanaka kunyange pane ese mativi emuviri. Iko hakuna nani kuzvibatsira pane izvi! Isu tinokurudzira zvinotevera (tinya mufananidzo pazasi) - inova yakazara ye5 trigger point / masipu emabhora muhukuru hwakasiyana:
3. Training: Kunyatsodzidziswa nehunyanzvi hwekudzidzira evapikisi vakasiyana (senge iyi yakazara seti yemapanga matanhatu ekusiyana kwakasiyana) inogona kukubatsira kudzidzisa simba uye kushanda. Kudzidzira Knit kunowanzoita kwakanyanya kudzidziswa, izvo zvinogona kutungamira pakukuvadza kwakanyanya kwekudzivirira nekudzora kurwadziwa.
4. Kurwadziswa Kunorwadza - Kutonhora: Biofreeze ndicho chigadzirwa chechisikigo chinogona kudzoreredza kurwadziwa nekutonhora nharaunda zvinyoro. Kutonhorera kunonyanya kukurudzirwa kana maricho ari akanyanya. Kana ivo vadzikama, ipapo kupisa kurapwa kunokurudzirwa - saka zvinokurudzirwa kuve nekutonhora uye kupisa kuchiripo.
5. Kurwadziwa Kununura - Kupisa: Kupisa kukwiza mhasuru kunogona kuwedzera kubuda kweropa uye kuderedza marwadzo. Tinokurudzira zvinotevera reusable inopisa / inotonhora gasket (tinya apa kuti uverenge zvakawanda nezvazvo) - iyo inogona kushandiswa zvese kutonhora (inogona kugwamba) uye nekupisa (inogona kudziirwa mu microwave).
Yakakurudzirwa zvigadzirwa zvekurwadziwa kwekushungurudzika kwemhasuru uye kwemajoini kurwadziwa
Kukuvadza ini shure og mutsipa? Tinokurudzira munhu wese ane marwadzo ekumusana kuti aedze kuwedzera kudzidziswa kunoitirwa chiuno nemabvi zvakare.
Edza IZVO ZVINYORWA ZVIMWE: - 5 Maekisesaizi Akanaka Anopesana neSciatica
DZIMWE ZVEKUFUNDA: - 6 Anobudirira Ekusimbisa Masimba Ekurapa Knee
WAZIVA HERE? - Kurapa kwechando kunogona kupa zororo rekurwadziwa kumaronda uye mhasuru? Pakati pezvimwe zvinhu, Biofreeze (unogona kuodha pano), iyo inowanzo kuve neyezvisikwa zvigadzirwa, chigadzirwa chakakurumbira. Bata nesu nhasi kuburikidza ne yedu Facebook peji kana iwe uchida zvimwe zvinokurudzirwa zvakagadzirirwa iwe.
NYAYA YOKUDA: - New Alzheimer kurapwa inodzosera yakazara ndangariro basa!
DZIMWE ZVEKUFUNDA: - Girazi redoro kana waini yemapfupa akasimba? Hongu!
- Iwe unoda rumwe ruzivo kana uine mibvunzo? Bvunza nyanzvi dzehutano dzehutano dzakaringana kuburikidza nezvedu Facebook Page.
VONDT.net - Ndokumbira kukoka shamwari dzako kuti dzide yedu saiti:
Isu tiri vamwe vakasununguka basa uko Ola naKari Nordmann vanogona kuwana mhinduro dzemibvunzo yavo kuburikidza yedu yemahara yekubvunza sevhisi nezve musculoskeletal hutano matambudziko - asingazivikanwe zvachose kana vachida. Mazana akatowana rubatsiro - saka wakamirirei? Taura nesu pasina kusungirwa nhasi!
Ndokumbirawo utsigire basa redu nekutitevera uye nekugovana zvinyorwa zvedu pasocial media:
- Ndokumbirawo utevere Vondt.net pa YOUTUBE
(Tevedzera uye utaure kana iwe uchida kuti tiite vhidhiyo ine chaiwo maekisesaizi kana elaborations kune ako chaiwo nyaya)
- Ndokumbirawo utevere Vondt.net pa Facebook
(Tinoedza kupindura kune ese mameseji uye mibvunzo mukati memaawa makumi maviri nemasere .. Iwe unosarudza kana iwe uchida mhinduro kubva kune chiropractor, chiropractor yemhuka, physiotherapist, wepanyama Therapist nekuenderera mberi nedzidzo mune zvekurapa, chiremba kana mukoti .. Tinogona zvakare kukubatsira kuti ndikuudze inokodzera dambudziko rako, inokubatsira kuti uwane vanokurudzirwa vanorapa, dudzira mhinduro dzeMMI uye nenyaya dzakafanana. Bata nesu nhasi kune runhare runoda)
Mifananidzo: Wikimedia Commons 2.0, Creative Commons, Freestockphotos uye akaendesa mipiro yevaverengi / mifananidzo.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Yoga-mot-stress.jpg?media=1648573622 650 1000 kundikuvadza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 kundikuvadza2016-08-16 17:18:412022-03-18 17:27:366 yoga maitikiro eStress
Peji 1 ye34123>»